kubudikidza Min Lim
Kana ukaona shamwari yako Negima sezvo kuri kuwedzera here, mikana yokuti kana imbwa yenyu haadi zuva renyu, kuti murege kana. Vakawanda vanodavira kuti panguva yokutanga kushanya kumba kwako, kana imbwa yenyu growls uye dzakachengeteka kubva musi wako, kuti hakumbofi chiratidzo chakanaka. Kazhinji inofunga chinhu chakaipa. Alarm mabhero upinde munyika musoro wako uye imi muri kumusoro akangwarira, pamwe Mr. Right harizakarurama, shure kwezvose.
Asi hapana chokwadi ichi?
We mavhidhiyo dzembwa inokwezva chinhu kubva vemapepanhau vachipiwa slippers, kusvetuka kuburikidza zvishwe uye mimicking muridzi wavo kufamba. Tinzwisise zvavanokwanisa uye vanobatwa vari pfungwa yokuti imbwa zvose innately vanokwanisa ava zvinoshamisa zvakapembererwa. Ehe, vari. Pashure kurovedza zvikuru kuti.
Tinoverenga pamusoro sei Jorodhani mhuri imbwa akaita noutsinye vakananga anosara yavo, Khan, uye unozotevera kuwanikwa kushungurudzwa abatwa patepi. Asi ichi ndicho pashure 5 mwedzi wokuva kumativi Khan uye vakacherechedza chii iye achiita, kwete pakarepo maitiro pashure pomusangano kutanga.
Vanhu vakawanda vanofunga imbwa dzavo vanogona kuona ngozi uye regai kutora zvakare nomutsa nevaya vangangokukuvadza mhuri dzavo. Protectiveness ndiwo mugumisiro emakore maberekero, apfuura pasi kubva kumarudzi namarudzi. Tinoverenga pamusoro pooches kusvetuka kuponesa varidzi vavo, kazhinji zvibayiro pachavo.
Pane rimwe divi, kana kuona Cesar Millan, yakakurumbira Dog Mucheri rakandidzidzisa chinhu, zviri kuti varidzi kazhinji havanzwisisi mutauro imbwa vavo uye avo nyika zvakawanda sezvavaida tariro.
Tichida dzinovaraidza zvokuti isu dzimwe nguva kukanganwa shamwari yepamwoyo kuti murume wacho haasi munhu. Iye imbwa. By zvakarurama kuverenga imbwa, iye akakwanisa umutsidzire navo, wokununura varidzi kubva zvinoita sezvisingabviri ezvinhu.
Cesar Millan anonyora, "Kenya kunobva kushungurudzwa imbwa uye kutonga. kushungurudzwa The wembwa anobva nokushayiwa imbwa muviri, uye kutonga imbwa kunobva kuna kushaya utungamiriri akadzikama-dzika. "Kungava here kuti kusava kurovedza kwakurudzira ichi kuita?
Imbwa chengetedzo Guide – Nyatsoteerera The Dog racho American usamo Club kunoratidza chimwe chikonzero, kungava kuti imbwa yenyu "nezvenhanho yaro chivanze pachedu pfuma uye kuti mhuka kana kuruma kuidzivirira" Izvi zvinoreva kuti imbwa yenyu paakasangana hakuna hako paakasangana yakananga munhu, munhu kuyambuka pachivanze yako kunoonekwa sechinhu mupasa.
Behavourists pazvigaro mativi ose fenzi nechouno. Chete unogona kusarudza kana datedar imbwa yenyu yakarurama. Asi usati kukanda Mr. Zvinogona kubuda pasuo, yaungada kumupa mukana wokuratidza ndiye Mr. Rudyi.